Ga Thailand? Jikere ịnwale ule 3 COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Ga Thailand? Jikere ịnwale ule 3 COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọ bụrụ na ị na -eme njem na Thailand, dịrị njikere ịnwale ugboro atọ - nke mbụ bụ n'ụbọchị mbata, nke abụọ n'ụbọchị nke isii ma ọ bụ nke asaa, na nke atọ n'ụbọchị nke iri na abụọ ma ọ bụ 12.
Prime Minista Thailand Gen. Prayut Chan-o-cha emepegharịrị njem na Phuket maka ndị njem ọgwụ mgbochi ụnyaahụ, Julaị 1.
Isi ihe achọrọ maka ndị ọbịa ka bụ na ha ga-esite na mba ma ọ bụ mpaghara ihe egwu COVID-19 dị ala.
Ndị njem ga -edebanye aha na ikpo okwu ndị metụtara ya ma nyefee akwụkwọ ha maka nkwenye.
Phuket emepegharịrị ndị njem nlegharị anya ịgba ọgwụ mgbochi taa (Julaị 1), na Prime Minista, Gen. Prayut Chan-o-cha, ga-abata na mpaghara ahụ ka ọ leba anya ịmalitegharị ya. Webụsaịtị Royal Gazette bipụtara iwu mberede mberede 26 na ihe achọrọ na ntuziaka maka ịmalitegharị mpaghara njem nlegharị anya na mpaghara pilot, malite na Tọzdee, Julaị 1. 2021.
Iwu a gbadoro anya na ihe ndị ọzọ achọrọ yana usoro ịchịkwa ọrịa maka ndị njem na -abanye Thailand. Iwu a na -akọwapụta mpaghara njem nlegharị anya na mpaghara ndị ọkwọ ụgbọ elu, ebe na -edobe ọnọdụ, oge, njikwa, na njirisi ndị ọzọ maka ndị njem na -abanye alaeze ahụ.
Banyere usoro njikwa ọrịa, Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) ewepụtala ụkpụrụ maka njem nlegharị anya Phuket Sandbox, ebipụtawo ha na webụsaịtị Royal Gazette. Isi ihe ndị a chọrọ ka dị na mbụ - ndị ama ama, ndị ọbịa ga -esite ala Ihe egwu COVID-19 mba ma ọ bụ mpaghara. A choro ka ha debanye aha na nyiwe yiri ya ma nyefee akwụkwọ ha maka nkwenye. Akwụkwọ ndị a bụ ndị a:
- Akwụkwọ ntinye
-Akwụkwọ ahụike nke gosipụtara ọrịa COVID-19 na-adịghị mma, na-eji nnwale ntụgharị polymerase chain (RT-PCR) ntụgharị n'ime awa 72 tupu ọpụpụ.
-mkpuchi mkpuchi ahụike, na-ekpuchi COVID-19, yana mkpuchi mkpuchi kacha nta bụ 100,000 US dollar
Ma ọ bụrụ na nsonaazụ ha adịghị mma mgbe ụbọchị iri na anọ gachara, ha nwere ike gaa mpaghara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha nọrọ ihe na -erughị ụbọchị iri na anọ, a naghị ekwe ka ha gaa ebe ndị ọzọ. (Foto faịlụ - njem ụgbọ mmiri na Koh Hae, Phuket)
- Akaebe nke ịkwụ ụgwọ nchekwa na nchịkwa ahụike (SHA) gbakwunyere maka ọ dịkarịa ala ụbọchị 14. Ndị ọbịa nọrọ ihe na -erughị ụbọchị 14 ga -enwerịrị tiketi na -akọwa ụbọchị ọpụpụ
- Asambodo nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ewepụtara ihe na -erughị ụbọchị 14. Ndị na-erubeghị afọ 18, ndị nne na nna ha ma ọ bụ ndị na-elekọta ha, ga-enwerịrị asambodo ahụike na-egosi ọrịa COVID-19 na-adịghị mma n'ime awa 72 tupu ọpụpụ.
Ndị njem na -abata na alaeze ga -agafe usoro mbata na ọpụpụ, wụnye ngwa ma ọ bụ usoro nsuso wee nwalee ugboro atọ. Nke mbụ bụ n’ụbọchị mbata, nke abụọ n’ụbọchị nke isii ma ọ bụ nke asaa na nke atọ n’ụbọchị nke iri na abụọ ma ọ bụ nke iri na atọ. Ndị ọbịa ga-akwụ ụgwọ nnwale COVID-12. Ọ bụrụ na nsonaazụ ha adịghị mma ka ụbọchị 13 gachara, ha nwere ike gaa mpaghara ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ha nọrọ ihe na -erughị ụbọchị iri na anọ, a naghị ekwe ka ha gaa ebe ndị ọzọ.